AGD ဘဏ်မှ ကားအရစ်ကျဝယ်ယူလျှင် အာမခံမလိုတော့ | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar
Used Cars (1216)	Sedan (353)
Home » News » AGD ဘဏ်မှ ကားအရစ်ကျဝယ်ယူလျှင် အာမခံမလိုတော့
admin | News | September 6, 2012
အမှတ်(၆၈)၊ ဒီပဲယင်းဝန်ထောက်ဦးမြဲလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၄)၊ လှိုင်သာယာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ဖုန်း ၀၁-၆၈၅၀၄၉* ရောင်းချသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစား – လူစီးမော်တော်ယာဉ် (ယာဉ်ငယ်)
အမှတ် ၁၅၃၊ မောင်သန်းလမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့ နယ်။ ဖုန်း – ၆၄၃၆၂၁၊ ၆၁၇၁၀၁၊ ၀၉ ၅၅၀၅၈၆၂* ရောင်းချသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစား – မီးစက်နှင့် ကားများ၊ လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်။
* ရောင်းချသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစား – လူစီးမောင်တော်ယာဉ် (ယာဉ်ငယ်)
5,698 total views,2today Print
17 Responses to “AGD ဘဏ်မှ ကားအရစ်ကျဝယ်ယူလျှင် အာမခံမလိုတော့”
Oo Kyin on September 8, 2012 @ 1:23 am ငှါးရမ်းခ ရာနှန်းက တနှစ်နှန်းလား တလနှန်းလား
Reply Mg Yit on September 8, 2012 @ 5:48 pm ဒီနေ့ေ၇ွှရမုံနဲ့ ဂါမနိကိုရောက်၏။ သူတို့တိတိကျကျဘာမှ မသိပါတဲ့။ ကဲ ဘာကြီးတုန်း.
Reply Shwe Linpaing on September 11, 2012 @ 12:22 pm clarifyabit,interested
Reply Aung Myin on September 11, 2012 @ 2:59 pm သိန်း(200)တန်ကားကို 1 နှစ် 20% ပေးနဲ့ဆိုရင်ကားတန်ဖိုးက (218) နဲ့ (40) အရင်ပေး တလကို (14.85) သိန်း.
သိန်း(200)တန်ကားကို2နှစ် 20% ပေးနဲ့ဆိုရင်ကားတန်ဖိုးက (226) နဲ့ (40) အရင်ပေး တလကို (7.75) သိန်း.
ဒါမှမဟုတ် 1% က တကြိမ်ဘဲပေးရမှာလား.
Reply Nay Myo Aung on October 8, 2012 @ 4:55 am AGD Bank (အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်) သိန်းနှစ်ရာတန် ကားအတွက် သက်တမ်း ၂နှစ် ကနဦးပေးသွင်းငွေ ၂၀% ဖြင့် သတ်မှတ်ပါက – ကနဦးပေးသွင်းငွေ ၂၀% (သိန်း၄၀) + ဝန်ဆောင်ခ ၁%(၂သိန်း) + ငှားရမ်းခ ၁၂%(၂၄သိန်း) စုစုပေါင်း ၆၆သိန်း ကို ပထမဦးဆုံး ပေးသွင်းရပါမည်။ ကျန်ငွေ ၈၀% (သိန်း၁၆၀) ကို ၂၄လ ခွဲပြီး တစ်လလျှင် ၆သိန်း၆သောင်း၆ထောင် ခန့် သွင်းပေးရပါမည်။
September 12 at 10:34am Reply Kyitha Kyaw on October 11, 2012 @ 5:59 am အကယ်လို့ contract ကို ဖျတ်သိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်ကော ဘယ်လို လျှော်ကျေးပေးဖို့လိုပါလဲ…
ပေးရမယ့် ပမာဏထက် ကျော်ပြီး ငွေသွင်းထားပြီးရင်ကော AGD အနေနဲ့ ဘယ်လိုပြန်ထုပ်ပေးပါသလဲ..???
Reply Mie Mie Bo on October 11, 2012 @ 8:46 am ငှားရမ်းခ ၁၂% က ဘာလို့ သိန်းနှစ်ရာ ပေါ်မှာတွက်တာပါလဲ … ကနဦးပေးသွင်းငွေ (သိန်း၄၀) နှုတ်ပြီး သိန်း၁၆၀ ကိုသာ ဘဏ်မှ ချေးတာ မဟုတ်ပါလား ?? နားမလည်လို့ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ် … Reply Rose Rain on September 15, 2012 @ 1:07 pm အသေးစိပ်ရှင်းပြဘို့ကောင်းတယါ
Reply Ye Tun on September 19, 2012 @ 2:32 pm so good
Reply Zawko Maung on September 20, 2012 @ 5:27 am Good for what for Haney ?
Reply Aung Oo on September 27, 2012 @ 11:12 am ဖြစ်ျနိုင်ရင် ကားတွေပြထားသင့်ပါတယ် ကားနှင့်တကွ အနီးစပ်ဆုံးဈေးနှုန်းများတွက်ချက်ပေးထားစေချင်ပါတယ်.
Reply Khinlay Sandy on September 28, 2012 @ 1:48 am X
Reply Stephen Lee on September 28, 2012 @ 3:26 am I would like to know more detail for process.
Reply Myo Khaing Win on September 30, 2012 @ 4:13 pm ကားနှင့်အတူဈေး တင်ပေးပါ
Reply Chitoo Thu on October 14, 2012 @ 5:07 am ၂ နှစ် သွင်းမည်ထားပါဆို့။ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ ကားဈေးက အကျဘက်ကိုပဲ ရောက်ဖို့များနေတော့ အဲဒါဆို ၀ယ်တဲ့သူတွေ တော်တော်နစ်နာမယ်နော်.
Reply Ayeayethein Tan on October 22, 2012 @ 10:02 am သိန်း120တန်ကားဆိုရင်2နှစ်ဆိုရင်တွက်ပြပေးပါ။
Reply Kawn Myat on April 19, 2013 @ 5:44 am welcome to kia car company.
by Hla Myo on 18 hours ago - 1 Comment
by Hla Myo on May 20, 2013 -3Comments
by admin on May 8, 2013 -5Comments
mitsubushi lancer evolution 8, 2000cc	want to change	landcruiser2000အဖြူရောင်အောက်ချိတ်gradeစုံသက်သာသောနှုံးဖြင့်ဝယ်လိုသည်။2007ရုပ်ဝင	Light truck (1 ton) toyota, nissan ၀ယ်လိုသည်	Toyota Hilux Surf	ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများInsight LS (47 views)TOYOTA CROWN ROYAL SALOON - G (46 views)Toyota wish 2003 Z grade with front &Back camera (41 views)Mark II 99 Trente 30th anniversary (40 views)Noah (39 views)mark2(38 views)NISSAN CEDRIC(2003)2.5L (36 views)Toyota Hilux Surf (35 views)Toyota Kluger (31 views)Toyota Probox 2008 (26 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar. All Rights Reserved.